မန်းရောဘတ် ဘဇန်မှဆရာတီးမသေသို. | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	မန်းရောဘတ် ဘဇန်မှဆရာတီးမသေသို.	December 18, 2010
ဆရာ…နောက်ဆုံး ပြောလိုတာက ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော် ၆ ယောက်အတွက် ကျနော်တို့ ၀မ်းနည်း ယူကြုံးမရ ဖြစ်ရပါတယ်၊ သေနတ်ကိုင်ထားတာ ကရင်ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ယုံမကဘူး၊ တိုင်းပြည်တ၀ှန်းလုံးရှိ လူမျိုးစုံပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ အသက် အိုး အိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်ဘို့ပါ တာဝန်ရှိတယ်။ တပြည်လုံးကို မကာကွယ်သေးမီ မိမိတို့ အဖွဲ့၏ အသက်လုံခြုံမှုကို အရင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ပါ၊ ရှိပီးသား လက်နက်တွေကို ကျစ်ကျစ် ဆုတ်ထားပါ၊ ကရင်အချင်းချင်းသွေးမြေကျ မဖြစ်အောင် စောင့်ထိမ်းပါ၊ ခေါင်းဆောင်ကြီး စောဘဦးကြီးရဲ့ သြ၀ါဒကိုမြေ၀ယ်မကျ စွဲကိုင်ပါလို့မှာကြားရင်း နိဂုံးချုပ်ခွင့်ပြုပါ။
ဒီဇင်ဘာလ (၁၅) ရက်-၂၀၁၀၊http://thawthikho.blogspot.com/2010/12/blog-post_5270.html သောသီးခိုးဘလော့မှာသွားဖတ်ပြီးကိုမိုးသီးဇွန်ဘလော့မှရယူဖော်ပြသည်၊ Share this:PrintEmailFacebookTwitterLike this:Like Loading...